कसरी पच्ला ३० लाख ?
मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६
पुष्प खड्काले समेत ३०÷३० लाख रुपैयाँ माग्न थालेपछि धेरै निर्माता फिल्म बनाउन छाडेर पलायन हुने सोचमा छन्। जसको एउटा फिल्म हिट भएको छैन, अनि जसको तेस्रो फिल्म रिलिज भएको छैन, उनले नै त्यति धेरै पैसा माग्न थालेपछि निर्माताको सातो किन नजाओस् ?
तर, पुष्पले यत्रोविधि पैसा माग्ने हिम्मतको पछाडि ‘दाल भात तरकारी’ थियो, जुन गत शुक्रबार रिलिज भइसकेको छ। तर, दर्शकले यो ‘दाल भात तरकारी’लाई राजमार्गको दाल भात तरकारीभन्दा गएगुज्रेको टिप्पणी गरेका छन्।
हास्य कलाकारको जम्बो टोली र सुमधुर संगीत हुँदाहुँदै पनि वर्षकै ठूलो मानिएको फिल्म टाइटानिकझैँ डुबेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि कम्तीमा पुष्पको भूमिकाले तारिफ पाएको भए पनि लौन भन्नु ? फिल्ममा उनको भूमिका एक्स्ट्राभन्दा कम छैन। यस्तै फिल्म र अभिनयले तीन हजार पनि पचाउन गाह्रो हुन्छ, ३० लाख कसरी पच्ला ?
धमाधम सिक्वेल सङ
१६ साउन २०७६
‘अब्बल अभिनेता असल मान्छे आर्यन’
कोटा प्रणालीले हित गर्ला त नेपाली फिल्मको?
नेपाली र्‍यापर भन्छन्‘र्‍यापमा जे पनि जायज हुन्छ’
३० असार २०७६
युट्युबमा चुपचाप चर्चित
१६ असार २०७६
‘हामी सेकेन्ड ह्यान्ड समाजमा बाँचेका छौँ’
छोरीको कुमारीत्व २७ लाखमा बेच्न खोज्ने आमा
मङ्गलबार, ०३ पुष २०७५
संसारमा हुने विचित्र सौन्दर्य प्रतियोगिता, मिस दुधालु गाईदेखि मिस कन्डमसम्म
आइतबार, ०१ पुष २०७५
कपाल झरे कसो गर्ने ? यस्तो छ ब्युटी एक्सपर्टको सल्लाह
शुक्रबार, २८ मङि्सर २०७५
आम्सटर्डमको नेपाल आगमन
'लुगा होइन मान्छेको सोच छोटो हो'
पूजाका नक्कली फ्यानको आतंक
बिहिबार, १६ साउन २०७६
छोरा बचाउने वीरु
शनिबार, ११ साउन २०७६
साम्राज्ञीको देखाउने रहर
लोकस्टार प्रतियोगी भन्छन् ‘लोकगीत देशको हृदय हो’